राष्ट्रियसभामा भोट जोगाउन हम्मे – Weekly Nepal
राष्ट्रियसभामा भोट जोगाउन हम्मे
in पत्रपत्रिका — ५ माघ २०७६, आईतवार ०९:५५
काठमाडौं । आउदो बिहीबार राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्यहरूको निर्वाचन हुँदैछ । आउँदो फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभा सदस्यको रूपमा आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरी रिक्त हुने १८ सिटमा सातवटै प्रदेशमा आ–आफूना उम्मेदवारलाई जिताउन दलहरू विभिन्न दाउपेचमा जुटेका छन्।
चुनावका लागि सत्तारूढ नेकपाले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग तालमेल गरेको छ भने प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संघीय समाजवादी दलसँग तालमेल गरेको छ। ’ राष्ट्रियसभाको चुनावमा प्रतिपक्ष कांग्रेस मतभारका हिसावले कमजोर देखिए पनि नेकपा र राजपाको चुनावी गठबन्धनपछि ती दलहरूमा उत्पन्न असन्तुष्टिको फाइदा कांग्रेस र संघीय समाजवादीले उठाउन सक्ने देखिन्छ । नेकपासँग तालमेल गरेपछि राजपाभित्रको असन्तु बनेको छ । यसैगरी नेकपाभित्र पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष चुनाव हारेकाहरूलाई दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले एकलौटी रूपमा भागबन्डा गरी उम्मेदवार चयन गरेपछि भित्रभित्रै असन्तुष्टिले भुसको आगोको रूप ग्रहण गरेको छ। कांग्रेसले प्रदेश नं. १ मा पाँचथरका नीरबहादुर विश्वकर्मा (दलित), सुनसरीकी मीना पुलामी मगर (महिला), झापाका राजेन्द्र घिमिरे (अन्य) लाई उम्मेदवार बनाएको छ । उता संघीय समाजवादीसँग तालमेल गरेको प्रदेश नं. २ मा कांग्रेसले महोत्तरीकी नगिना यादव (महिला) र धनुषाका भोला पञ्जियार (अल्पसंख्यकरअपांगता) लाई उम्मेदवार बनाएको छ। प्रदेश नं. ३ अर्थात बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोकका हरिशरण श्रेष्ठ (अन्य) र चितवनकी छलिकुमारी शर्मा उपाध्याय (महिलाले काग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशबाट स्याङ्जाका सूर्यप्रसाद रेग्मी (अन्य) र म्याग्दीकी विमला गौचन (महिला)ले कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका
छन् । प्रदेश नं. ५ बाट अर्घाखाँचीका बालकृष्ण पाण्डे (अन्य), दाङका गिरिजा न्यौपाने (महिला) र बाँकेका मेराज हलवाई ( अल्पसंख्यरअपांगता) कांग्रेसका उम्मेदवार हुन् । कर्णाली प्रदेशबाट
सुर्खेतका डिल्लीराम पाठक (अन्य) र सुर्खेतकै सावित्री पौडेल (महिला) उम्मेदवार हुन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैतडीका प्रताप ठगुन्ना (अन्य) र कैलालीकी तुलसी देवकोटा (महिला)ले उम्मेदवारी दिएका छन्।
। प्रदेश नं. २ मा नेकपासँग तालमेल गरी राजपाले राष्ट्रियसभाका चयन गरेका उम्मेदवार हरूको विषयमा उक्त पार्टीभित्र बाँकी छ पृष्ठमा ्र उब्जेको विवाद अहिलेसम्म पनि साम्य भएको छैन । राजपाका असन्तुष्ट समूहमध्ये केहीलाई संघीय समाजवादीले आफ नो उम्मेदवार बनाएको छ । त्यसैले राजपाभित्रको असन्तुष्ट पक्षले कांग्रेस र संघीय समाजवादीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ । यही असन्तुष्टिलाई चिर्न नेकपा र राजपाका नेताहरूले प्रदेश नं. २ मा निकै मेहनत गरिरहेका छन् तर उनीहरूमा यसमा सफल हुन सकेका छैनन्। राजपाका कतिपय नेताहरूले नै आर्थिक चलखेल गरेर उम्मेदवार चयन गरेको आरोप नेतृत्वलाई लगाएका छन् । ५० जनाभन्दा बढी आकांक्षीहरूलाई पछार्दै सप्तरीका शेखर सिंह र सप्तरीकै मगेन्द्र सिंह यादवले नेतृत्वलाई मोटो नजराना बझाएकै भरमा टिकट पाएपछि त्यसले पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताहरू चिढिएका छन् । राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यद्वय शरतसिंह भण्डारीको सिफारिसमा सिंह र राजेन्द्र महतोको सिफारिसमा यादवले टिकट पाएका हुन्। अघिल्लो पटक राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर र महेन्द्र यादवले एक–एक जना उम्मेदवार सिफारिस गर्ने अवसर पाएका थिए । जसअनुसार विर्खेशचन्द्र लाल र रमेश यादवले त्यो मौका पाएका थिए । त्यसैले यसपटक भण्डारी र महतोलाई उम्मेदवार छान्ने अवसर दिइएको थियो । उक्त अवसरलाई उनीहरूले कमाउने माध्यम बनाएपछि त्यसको फाइदा कांग्रेस र संघीय समाजवादीलाई हुने अवस्था बनेको हो । भण्डारी र महतोले सम्भ्रान्त परिवारका र राजावादी पृष्ठभूमि
भएका सिंह र यादवलाई टिकट दिए । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको दाबी असन्तुष्ट नेताहरूले गरेका छन् । राजपाले छानेका उम्मेदवारको विषयमा राजपाका नेता ठाकुर पनि असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । पार्टीमा असन्तुष्टि बढेकै कारण ठाकुरको निर्देशनमा पुस २७, २८ र २९ राते महोत्तरीको बर्दिबासमा हुने भनिएको तयारी समितिको बैठक र मतदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित गरियो । जबकि बर्दिबासमा पुसको अन्तिम साता ३ दिन बैठक गरी महाधिवेशनको तयारीको बारेमा छलफल गर्ने तथा प्रदेश २ को राष्ट्रियसभामा पार्टीको तर्फबाट चुनाव जितेका मतदाताहरूलाई बोलाएर प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम राखिएको थियो । यसैगरी एक दिन पर्यवेक्षकहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। यता नेकपाभित्र पनि राजपासँगको चुनावी गठबन्धनले व्यापक असन्तुष्टि पैदा गराएको छ । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम् राजपासँगको तालमेलले सन्तुष्ट नरहेको स्रोत बताउँछ । उनको चाहना बेगरै ओलीले पार्टीमा छलफलै नगरी राजपासँग चुनावी तालमेल गरे । राजपासँगको तालमेल गर्ने दुई अध्यक्षको
निर्णयप्रति स्थायी समिति बैठकमा चर्को आलोचना भएको थियो । संघीय समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेको भए नेकपाले थप
एक सिट बढी पाउने सुनिश्चित थियो । तर राजपासँगको तालमेलले नेकपाले आफ्नो भागको दुई सिट राजपालाई बुझाउनु पर्नेछ। प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी मत नेकपासंग छ। नेकपाको ३२ प्रदेशसभा सदस्य तथा ८३ प्रमुख र उपप्रमुखसहित कल मतभार तीन हजार ३० छ ।
त्यसपछि दोसो स्थानमा समाजवादीको ३० प्रदेश सदस्यसहित ५२ वटा प्रमुख र उपप्रमुखसहित कुल मतभार २ हजार ३ सय ७६ छ । तेस्रो स्थानमा रहेको काग्रेससंग १९ प्रदेश सदस्य तथा ८१ प्रमुख र उपप्रमुखसहित २ हजार ३ सय ७० मतभार छ। राजपाको २५ प्रदेशसभा सदस्य तथा ५४ प्रमुख र उपप्रमुखसहित २ हजार १ सय ७२ मतभार रहेको छ। त्यसमाथि, रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी संग प्रदेशसभा सदस्य एकसहित ४८ र हरिचरण साह नेतृत्वको नेपाली जनता दलको दुई प्रमुख र उपप्रमुखसहित ३६ मतभार रहेको छ। राष्ट्रियसभामा पहिलो दुई वर्षको कार्यकाल पूरा हुने सदस्यहरूमा नेकपाका नौ, नेपाली कांग्रेसका सात, राजपाका दुई र समाजवादी पार्टीका एक सदस्य छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका मतदाता गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्य हुन् । यो निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् धेरै मत प्राप्त गर्ने नै विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीबाटै उम्मेदवारको चयन हुनेछ । निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसंख्यक दुई र अन्य सातजना निर्वाचित हुनेछन् ।
स‌ंरक्षित पुराना सामाग्री Select Month July 2020 (245) June 2020 (702) May 2020 (885) April 2020 (713) March 2020 (578) February 2020 (477) January 2020 (816) December 2019 (69) September 2019 (155) August 2019 (645)